ထိုင်းနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် ဆာမီလာကမ်းခြေတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ အထင်ကရရေသူမ ကျောက်ရုပ် ပျက်စီး - Yangon Media Group
ထိုင်းနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် ဆာမီလာကမ်းခြေတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၊ အထင်ကရရေသူမ ကျောက်ရုပ် ပျက်စီး
ဆောင်ခလာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော် ဆာမီလာကမ်းခြေတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ညပိုင်းက ဗုံးနှစ်လုံးပေါက်ကွဲ ခဲ့ပြီး အခြားဗုံးသုံးလုံးကိုလည်း ကမ်းခြေတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် လုံခြုံရေး အစီအမံများ အမြင့်ဆုံးအထိ ချထားခဲ့ကြောင်း၊ မူအန်းခရိုင်ရှိ လမ်းများကိုလည်း အများပြည်သူ သွားလာခွင့်ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူသေဆုံးမှုမရှိခဲ့ပေ။
ယင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုများမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် ည ၁ဝ နာရီခွဲ ခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း၊ တိုက်ခိုက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်သည့် အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်၊ နံနက် ပိုင်းအထိ လုံခြုံရေးအာဏာပိုင် များက ကမ်းခြေကို စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ကမ်းခြေရှိ အထင်ကရ ရုပ်တုအချို့ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ဆောင် ခလာပြည်နယ် ကမ်းခြေတွင်ရှိသည့် ရေသူမရုပ်တု၊ ကြောင်နှင့်ကြွက်ရုပ် တုတို့မှာ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကမ်း ခြေ၌ အခြားဗုံးသုံးလုံးကိုလည်း တွေ့ရှိပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်း နောက်ကမ်းခြေကို ပိတ်ထားလိုက် ပြီး ရတ်ချာဒမ်နိုအန်လမ်းနှင့် ချာ လတ်တတ်လမ်းတို့ကို အများပြည် သူသွားလာခွင့် ပိတ်ထားလိုက် သည်။ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသည်များအားလုံးထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက် ဒီ ဇင်ဘာ ၂၆ရက်ညပိုင်းတွင် ယင်း ဗုံးများကို နေရာချထားခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ယုံ ကြည်ထားသည်။
နှစ်သစ်ကူးချိန် စက္ကန့်ရေ တွက်မှုနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများပြုလုပ် ရန်စီစဉ်ထားသည့် ဆောင်ခလာ ပြည်နယ်အထူးသဖြင့် ဟတ်ယိုင် ခရိုင်တွင် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာ ချထားသည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းဗုံး ဖောက်ခွဲမှုနောက်ကွယ်တွင် ဘာ ရီဆန်ရီဗိုလူစီနာရှင်နယ်သောင်း ကျန်းသူအဖွဲ့ရှိနေကြောင်း လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြောသည်။ ရေသူမရုပ်တု၊ ကြောင်နှင့်ြ<ွကက်ရုပ်တုတို့ကို ဗုံးခွဲခဲ့ခြင်းသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီးပွားရေးကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆို သည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီး သည်များသည် ယင်းရုပ်တုများနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုကို သဘောကျ လေ့ရှိသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညောင်ရွာကျေးရွာမှ နေအိမ်အချို့အား ကျူးကျော်ဟုဆိုကာ တတိယအကြိမ် လာရောက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ လေထုတွင်း သန့်စင်ရန်နှင့် ဖုန်သိပ်စေရန် မီးသတ်သမားများက တိုက်မြင့်များပေါ်မ?
ပြက္ခရွေ့တောင် ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲတွင် ဒိုးပတ်ပြိုင်ပွဲနှင့် ဓမ္မာရုံ အဆောက်အအုံ ငါးလုံးလှူဒ?
အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျကို အမှတ်ရဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ရွှေဘို မြို့တည်နန်းတည် (၂၆၆ )နှစ်ပြည့်အောင်ပွဲ စည်ကားစွာ ကျင်းပ
ဆေးရုံပြင်ဆင်စရိတ်များ ကျပ်ငွေသန်းချီ ချပေးထား၊ ပြင်ဆင်စရိတ် မတောင်းကြသဖြင့် ပေးလို့မရဖြ?